တရုတ်-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု မြန်မာကုန်သည်၊ တောင်သူများထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေရန် နယ်စပ်ကုန်စည်ဒိုင်များကို နိုင်ငံအတွင်းဘက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ရမည်ဟုဆို - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၂၇- တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု တွင် မြန်မာကုန်သည်၊ တောင်သူများ ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေရန် နယ်စပ် ကုန်စည်ဒိုင်များကို နိုင်ငံအတွင်းဘက် သို့ ပြောင်းရွှေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ် မှုဗဟိုဌာန တာဝန်ခံ ဒေါက်တာ သက် လွင်ဦးမှသိရသည်။
လက်ရှိတရုတ်-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ အဓိက ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော မူဆယ်နယ်စပ်ကုန်သွယ် ရေးဇုန်တွင် ရှမ်းပြည် နယ်မြောက်ပိုင်း ဒေသတွင်းတိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေ ခြင်းကြောင့် ကုန်သွယ်မှုပြတ်တောက် လျက်ရှိခြင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏တရား မဝင်ကုန်သွယ်မှု တားဆီးထိန်းချုပ် ရေးစီမံချက်ကြောင့် ပို့ကုန်များ တရုတ် နိုင်ငံသို့ မတင်ပို့နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် မြန်မာကုန်သည်များ၊ တောင်သူများ ထိခိုက်နစ်နာမှုများဖြင့် တွေ့ကြုံနေ ရကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန် သွယ်မှုဗဟိုဌာနတာဝန်ခံ ဒေါက်တာ သက်လွင်ဦးက “သူတို့ရဲ့ ဈေးနှိမ် မခံရအောင် နောက်ပိုင်း ကျွန်တော် တို့ဆီက ပို့လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကို အနောက်ဆုတ်ထားရင်ျလေန ဖြစ် တာပေါ့။ မူဆယ်နဲ့ချင်းရွှေဟော်ဆို တာက တစ်လမ်းတည်းကနေသွား ရတာ။ သိန္နီရောက်မှ လမ်းခွဲသွား တာဆိုတော့ လမ်းခွဲမရောက်ခင် နေရာမှာ သူတို့ကိုလာဝယ် ခိုင်းရမယ်။ နယ်စပ်ရောက်မှမဝယ်ခိုင်းဘဲ သိန္နီ တက်ဝယ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်မှာ ရွေးချယ်စရာရှိသွားမယ်။ ဘယ်လို လဲဆိုတော့ မူဆယ် ကဝယ်မှာလား မဝယ်ရင် ချင်းရွှေဟော်ပို့မယ်။ ဒီလို မှမဟုတ်ဘဲ အခုလိုနယ်စပ်ရောက် မှဆိုရင် ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူး။ ဂိတ်ဆုံးသွားရော။ ပြန်လာလို့လည်း မ ဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့်နောက် ပိုင်းနောက်ကို ဆွဲထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေ တယ်။ နောက်ဆုတ် တယ်ဆိုတာမှာ ကုန်သွယ်ရေးဇုန်ကိုမဟုတ်ဘူး။ ဂိတ် ကို နောက်ဆုံးမှာ ဥပမာကုန်စည် ဒိုင်ကို နောက်ဆုတ်ရင်ဆုတ်မှာပေါ့။ ဒါက အခုမဆုတ်သေးဘူး။ ဒီလို plan တွေနဲ့လုပ်မှရမယ် ” ဟု ဩဂုတ် ၂၇ရက်က မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာန၌ ကျင်းပသည့် သစ်သီးဝလံများ ပြည်ပဈေးကွက် တိုးမြှင့်တင်ပို့နိုင်ရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် မီဒီယာများကို ပြောသည်။
ယင်းအပြင် လာမည့်နိုဝင်ဘာ လတွင်ကျင်းပမည့် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးကုန်စည်ပြပွဲကို မူဆယ် အစား လားရှိုးတွင်ပြောင်း လဲ ကျင်းပရန်စီစဉ် ထားရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒေါက်တာသက်လွင်ဦးက “လာမယ့်နိုဝင်ဘာလပိုင်းမှာ လားရှိုး မှာကုန်စည်ပြပွဲလုပ်မယ်။ အရင်တုန်း က နယ်စပ်ကုန်စည်ပြပွဲတွေ အကုန် လုံးကို နယ်စပ်မှာပဲသွားလုပ်တယ်။ မူဆယ်မှာ ဘာမှမပြည့်စုံတော့ ကျွန် တော်တို့ဘက်ကလူတွေက ဟိုဘက် မှာထမင်း သွားစားကြ တယ်။ အိပ် တယ်။ နံနက်ကျမှ ကုန်စည်ပြပွဲလာ တယ်။ ဟိုဘက်က တရုတ်တွေက လည်း နံနက်မိုးလင်းမှထလာကြ တော့ ပွဲသာလုပ်တာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအတွက် ဘာမှမကျန်ခဲ့ဘူး။အဲဒီ တော့အနောက်ဆုတ်တယ်။ နိုဝင် ဘာမှာလုပ်မယ့် ကုန်စည်ပြ ပွဲကို လားရှိုး မှာသွားလုပ်မယ်။ လားရှိုးမှာသွား လုပ်တော့ အတွင်းထဲရောက်သွား ပြီ။ တရုတ်ပြည်ကလာတက်မယ့်သူ ကလည်း လားရှိုးမှာညအိပ်ရမယ်။ လားရှိုးမှာစားရမယ်။ သူ့ပိုက်ဆံတွေ ကိုယ့်ဆီမှာကျန်ခဲ့မယ်။ အဲဒီလိုပုံစံနဲ့ တဖြည်းဖြည်းချင်း သူတို့ကိုဆွဲထည့် မှ ကိုယ့်နိုင်ငံလည်းအကျိုးရှိမယ်” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိ တရုတ်-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတွင် နယ်စပ်သို့ ရောက်ရှိနေသော ဆန်အပါအဝင် ဆန်ကွဲ၊ ပြောင်း၊ သကြား စသည် တို့မှာ တရုတ်နိုင်ငံ၏တရားမဝင်ကုန် သွယ်မှုတားဆီးထိန်းချုပ်ရေး စီမံ ချက်ကြောင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့တင်ပို့ နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ အချိန်ကြာမြင့်လာ သည့်အတွက် စတင်ပျက်စီးအခြေ အနေဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရ သည်။
မန္တလေး စက်သုံးဆီ သိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးရေး ဆိပ်ကမ်းအား တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ (Pilot Project) ဖြင့် ?
ဗိုလ်တထောင် ဆံတော်ရှင်မြတ်ကို ပြည်သူများ ဖူးမြော်ကြည်ညိုနိုင်ရန် ရွှေတိဂုံစေတီတော် ချမ်းသ?
လူရည်ချွန် စခန်းဝင်မည့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း လူရည်ချွန်မောင်မယ်များ ပင်လယ်ကမ်းခြေငွေဆောင်သို?